तपाईं प्रत्येक दिन पर्याप्त फाइबर खाँदै हुनुहुन्छ? जस्ले प्राणघातक रोग बाट जोगाउछ ! – Public Health Concern(PHC)
तपाईं प्रत्येक दिन पर्याप्त फाइबर खाँदै हुनुहुन्छ? जस्ले प्राणघातक रोग बाट जोगाउछ !
in मेरो स्वास्थ्य : मेरो सरोकार, स्वास्थ्य जीवन शैली
युनाइटेड स्टेट्समा सिफारिस गरिएको आहार फाइबर सेवन 25 ग्राम प्रती महिलाहरु रहेको छ ! र पुरुषहरूको हकमा 38 ग्राम प्रति दिन रहेको छ। तर अधिकांश व्यक्तिहरूले त्यसको आधा मात्रै खाने गरेको तथ्यांकले देखाउछ।
भर्खरै विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा गरिएको ल्यान सेट जर्नलमा प्रकाशितक एक अध्ययनले, फाइबर स्वास्थ्यका लागि एक महत्त्वपूर्ण रहेको प्रमाणित गरेको छ। तथ्यांकअनुसार फाइबर युक्त खाना खाएका मानिसहरुको तुलनामा,कम फाइबर युक्त खाना खाने मानिसहरुको छिटो मृत्युु हुने र प्राणघातक रोगहरु लाग्ने जोखिम बढिरहेको देखाएको छ ।
कस्ता मानिसलाई लामखुट्टेले बढी टोक्छ?यस्ता छन कारण !
हामीले खाने प्रत्येक आहारमा 8-ग्राम वृद्धि गरि खाएमा, हृदय रोग, मधुमेह, र आन्द्राको क्यान्सरको कारण मृत्यु र घटनाहरूको कुल संख्यामा 5% देखि 27% सम्मले कमि आउने तथ्यांकले देखाएको छ। लेखकहरू भन्छन; प्रतिदिन 25 देखि 29 ग्राम फाईबर मिश्रत खाना एक बयस्कले खाएमा प्राण घातक रोगको प्रती सुरक्षा दिनेकुरा बताउछ्न !
Tags: happy lifehealthy life
कोहि त मर्छ्न अस्पताल नहेरी ; हाम्रो नेपालमा !
सरकारी अस्पतालमा चुरोट खाए ठाउँका ठाउँ कारबाही हुने !
धेरै टाउको दुख्छ ? माईग्रेन पो होकि !(समाधानका उपायहरु सहित )
निजामती कर्मचारी अस्पतालमा कस्लाई कस्तो सुबिधा ?